Raw Trastuzumab (180288-69-1) HPLC≥98% | AASraw
/ Products / vamwe / Trastuzumab (180288-69-1)
Rating: SKU: 180288-69-1. Category: vamwe
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika mukurongeka kweTrastuzumab (CAS 180288-69-1), pasi pemutemo weCGMP uye nehutsika hwehutano hwehutsika.
Trastuzumab powder inoshandiswa mukurapa kweHER2-positive kenza yemazamu. HER2 protein ineverexpression inowanikwa mu 25% -30% yepamuviri yekenza yemazamu.Trastuzumab yakaratidzwa, mune zvose zviri muzvivheneko uye mumhuka, kudzivisa kupararira kwemakumbo evanhu anowedzera HER2.
Trastuzumab (180288-69-1) kushandiswa mu steroid cycle
Trastuzumab (CAS 180288-69-1), zita rekutengeserana ndiro Herceptin.
Trastuzumab inopiwa kuburikidza nekukanganiswa muvhein (kubata, IV). Nhamba yekutanga inopiwa pamusoro pemaminitsi 90. Kana zvakanyatsoritswa pashure pekuchengetedza maitiro zvinogona kupiwa pamusoro pemaminitsi 30.
Nhamba yeTrastuzumab (180288-69-1) yaunogamuchira inobva pane zvinhu zvakawanda, kusanganisira kureba kwako uye uremu, hutano hwako hukuru kana mamwe matambudziko ehutano, uye rudzi rwekenza kana mamiriro ekurapwa. Chiremba wako achagadzirisa mukana wako uye purogiramu.
Chikamu chakakomba asi chisina kujairika cheTrastuzumab chinogona kupindira nekugadzirisa chinangwa chemoyo. Kuitika kwematambudziko emwoyo (mwoyo kusakonzerwa) kuwedzera kune vanhu vane chirwere chepfungwa kana zvimwe zvinokonzera njodzi dzakadai sedhiation kusvika muchipfuva, kufambira mberi, uye kushandiswa kwemimwe mishonga inokonzera mwoyo (yakadai se doxorubicin uye cyclophosphamide). Chiremba wako anogona kutarisa mwoyo wako basa usati watora chero Trastuzumab uye ichacherechedza mwoyo wako zvakanyanya panguva yekurapa kwako. Trastuzumab (180288-69-1) inogona kubviswa kana zviratidzo zvemoyo kusakatika kuonekwa.
MaMonoclonal antibodies mhando nyowani nyowani ye "yakanangwa" yekurapa kenza. Antibodies chikamu chemuviri immune. Kazhinji, muviri unogadzira antibodies mukupindura kune antigen (senge protein mune germ) inopinda mumuviri. Masoja ekudzivirira chirwere anonamatira kune antigen kuitira kuimaka kuti iparadzwe ne immune system. Murabhoritari, masayendisiti anoongorora mamwe maantigen pamusoro pecancer cells (target) kuona protein inofananidzwa neantigen. Zvino, vachishandisa mapuroteni emhuka nevanhu, masayendisiti anoshanda kugadzira hutachiona hwakakosha hunonamatira kune antigen. Maantibodies anonamira kune anofananidza maantigen sekiyi inokiya kukiya. Iyi tekinoroji inobvumira kurapwa kunongedza chaiwo maseru, zvichikonzera kushomeka kune maseru ane hutano. Monoclonal antibody therapy inogona kuitirwa chete kanzira umo maantigen (nema antibodies akanangana) akaonekwa.
Trastuzumab inoshanda nekutsvaga HER2 / neu receptor nekenza masero. IHER2 gene inobereka puroteni yakagadziriswa pane imwe sero pamusoro inoratidza chidimbu chekukura kwemasero nekuudza sero kugovana uye kuwedzera. Mimwe mishonga yekenza yakawanda ine HER2 (HER2 / neu overexpression), ichiita kuti masero aparadzanise uye awedzere nokukurumidza. Trastuzumab (180288-69-1) inosungirirwa kumagamuchirwa eHER2 kudzivirira masero kuti asawanda, kudzivirira kukanganisa kenza yemukomana nekuderedza kufambira mberi kwekenza. Inogonawo kushanda kuburikidza nekukurudzira maitiro ekudzivirira muviri.
Nzira yekutenga Trastuzumab kubva kuAASraw